Izindaba - Indlela yokukhipha i-epoxy, i-glue, okokunamathela ku-concrete floor
Ama-epoxies namanye ama-topical sealants afana nawo angaba yizindlela ezinhle neziqinile zokuvikela ukhonkolo wakho kodwa ukususa le mikhiqizo kungaba nzima. Lapha batusa ezinye izindlela ezingathuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kwakho.
Okokuqala, Uma i-epoxy, iglue, upende, okokumboza phansi akuncane kakhulu, njengangaphansi kwe-1mm, ungazama ukusebenzisa. Metal Bond Diamond Ukugaya Izicathulongezingxenye ze-angle ezibukhali, njengezigaba zomcibisholo, izingxenye ze-rhombus njalonjalo, ukuze ukwandise ubukhali, kungcono ukhethe izicathulo zokugaya ingxenye eyodwa. Senza izinhlobo ezihlukahlukene zokugaya izicathulo zemishini ehlukene, isibonelo, i-Husqvarna, i-HTC, i-Lavina, i-Werkmaster, i-Sase, i-STI, i-Terrco njll, izinsizakalo ze-ODM/OEM ziyatholakala kithi.
Okwesibili, Uma i-epoxy endaweni ephansi iwugqinsi kancane, phakathi no-2mm ~ 5mm, Ungazama ukusebenzisa PCD Gring Amathuluziukuxazulula inkinga. I-Polycrystalline Diamond (PCD) igrit yedayimane ehlanganiswe ndawonye ngaphansi kwezimo zokucindezela okukhulu, nezinga lokushisa eliphezulu phambi kwensimbi eshukumisayo. Qhathanisa nezicathulo zokugaya zensimbi zendabuko, ngeke zilayishe noma zigcobe ukugqoka; Amathuluzi okugaya e-PCD angomunye wemikhiqizo esebenza kahle kakhulu yokukhipha ama-coatings, angasindisa ngokushesha isikhathi sakho nezindleko zomsebenzi; zinesikhathi eside kakhulu sokuphila, zinciphisa kakhulu izindleko zempahla yakho. Usayizi we-PCD nezinombolo zesegimenti zingakhethwa njengesicelo sakho.
Okwesithathu, Uma i-epoxy ijiyile ngokwedlulele, imishini yokudubula ingasetshenziswa ukususa amajazi e-epoxy kanye namanye ama-topical sealant / opende kusukela phansi kukakhonkolo. Imishini yokudubula isebenzisa ama-pellets ensimbi amancane (adutshulwe) aqhunyiswe phezu kukakhonkolo, asusa noma yikuphi ukunamathela okunenkani. Le mishini iphinda isebenzise isibhamu esinciphisa imfucuza. Futhi banesistimu ye-vacuum enamathiselwe ngakho uthuli oluningi luyasuswa. Lena enye yezindlela ezingcono kakhulu nezishesha kakhulu zokususa ama-sealant aminyene avela kukhonkolo phansi. Uhlangothi olungezansi lokusebenzisa le mishini ukuthi ishiya phansi kungamaholoholo njengomgwaqo ukuze ukhonkolo omningi wangaphakathi ucijiswe ngemva kokusetshenziswa.
Ekugcineni, uma usenkingeni yokuthi ungayisusa kanjani i-epoxy, i-coating, iglue endaweni ekhonkolo, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi, singanikeza amathuluzi angcono kakhulu wokuyixazulula.